Donald Trump oo wax aanu fileyn kala kulmay Magaalooyin uu booqday - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaDonald Trump oo wax aanu fileyn kala kulmay Magaalooyin uu booqday
Madaxweynaha Mareykanka, Donad Trump ayaa booqday laba Magaalo oo ku yaalla Mareykanka, kuwaas oo dadka ku nool ay wali la murugoonayaan dadkii lagu laayay toogashada.
Donald Trump ayaa intii uu ku sugnaa halkaas waxaa uu la kulmay dibadbaxyo iyo hadallo kulul oo ay is dhaafsadeen siyaasiyiinta Magaalooyinkaas.
Madaxweynaha ayaa ku baaqay in shacabka Mareykanka ay midoobaan, kadib weeraradii ka dhacay Texas iyo Ohio oo qof hubeysan uu dad gaaraya 30 qof uu ku laayay.
Balse dhaleceynta ah inuusan waxba ka qabanin xakameynta hubka ayaa wali taagan. El Paso iyo Texas ayaa waxaa isugu soo baxay dad dibadbaxayaal ah, kuwaas oo watay boorar ay ku xardhan yihiin hal ku dhigyo ay ka mid yihiin “Cunsuri ayaad tahay ee halkii aad ka timid ku laabo”.
Dadka ayaa taagnaa wadooyinka, waxayan sidoo kale ku qeylinayeen “halkan lagaama jecla, cunsuri ayaa tahay”. Sidoo kale waxaa isu soo baxay dad iyaguna tageersan Madaxweyne Trump.
Dad gaaraya 31 qof ayaa ku dhintay weeraradii ka dhacay El Paso iyo Dayton, kuwaasi oo isku maalin dhacay.
Sideey ahayd xaaladda Magaalada El Paso?
Trump iyo xaaskiisa Melania ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Texas ku soo dhaweeyay Gubanatoore Greg Abbott iyo duqa El Paso, Dee Margo, kahor inta aanan la soo galbinin.
Mas’uuliyiinta ayaa booqday xaruumo caafimaad oo ay ka mid tahay xaruumaha lagula tacaalo xaaladaha degdeg ah, waxaana halkaas ay kula kulmeen shaqaalaha gargaarka iyo dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay weerarka.
Haweeneyda aqalka Kongreska ku matasha El Paso, Veronica Escobar ayaa diiday inay la kulanto Madaxweyne Trump, ayadoona ku tilmaamtay “Qof cunsuri ah” iyo in uu dhibaateeyay dadka ay matasho.
Weerarka El Paso oo ay ku dhinteen 22 qof ayaa loo aqoonsaday in uu ahaa mid naceyb ay ku dheehan tahay, waxaana ninka weerarka geystay loo maleeyay in uu yahay mid baraha bulshada soo dhigay hadallo naceyb ah.
Hasayeeshee, hadalladii uu adeegsdaay ayaa ahaa kuwa ay ka mid yihiin duulaan, kuwaa oo Madaxweyne Trump uu u adeegsaday markii ay muhaajiriinta soo buux dhaafiyeen xadka Mareykanka iyo Mexico.
Sidee Trump loogu qaabilay Dayton?
Garoonka diyaaradaha ee Dayton ayaa waxaa wafdiga Madaxweynaha ku soo dhaweeyay duqa Magaalada, Nan Whaley, waxayna si toos ah u aadeen isbitalka Miami Valley Hospital oo ay kula kulmeen dadkii ka badbaaday weerarka iyo shaqaalaha caafimmaadka.
Trump ayaa dadkii uu la kulmay ku yiri ” Waxaan rabaa inaad ogaatan in marwalba aan idin garab taaganahay”.
Balse dad isugu soo baxay afaafka hore ee isbitalka oo aan la dhacsaneyn siyaasadahiisa ayaa waxay ruxayeen boorar ay ku qoran yihiin “wax ka qabo arrimahan, adigaa sabab u ah”.
Mas’uuliyiinta kala ah Whaley iyo Sherrod Brown ayaa waxay shegeen in ay tahay arrin wanaagsan in Madaxweynaha uu yimaado, si wanaagsanna loo qaabilay, balse waxaa ay walaac ka muujiyeen hadalladii qalafsanaa ee uu horay u yiri, waxayna intaa raaciyeen inay ku cadaadiyeen sidii uu wax uga qaban lahaa hubka ay sida sahlan isaga helaan dadka.
Magaaladan uu booqday Trump ayaa waxa ku dhintay dad gaaraya sagaal qof. Ninka weerarka geystay oo lagu magacaabo old Connor Betts, ayaa waxaa markii dambe toogtay booliska.
Dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay weerarka ayaa waxaa ka mid ah gabadh la dhalatay ninka weerarka geystay.
Booliska oo wali ku hawlan baaritaanka la xiriira weerarka ayaa waxay shegeen inay heleen caddeymo muujinaya in ninka weerarka geystay uu aaminsanaa afkaar gacan ka hadal ah.
Siduu Trump uga hadlay weerarka?
Khudbad uu jeediyay Trump ayuu ku cambaareeyay weerarka iyo dadka caddaannimada ay ku weyn tahay.
Afhayeenka aqalka cad, Hogan Gidley ayaa arrin aan macquul ahayn ku tilmaamay in Trump lagu eedeeyo weerarkii El Paso, waxaana uu yiri ” Waa in aad eedda dusha ka saartaa dadkii xabadda riday”.
Isku day uu Madaxweyne Trump iyo dad kale ay ku doonayeen in weeraradaas ay kula xiriiriyaan xanuunada dhanka maskaxda ayaa waxaa cambaareeyay khubarada dhanka caafimmadka.
“Waa muhiim in la ogaadaa in inta badan dadka maskaxda ka xanuunsan aysan ahayn dad looga bartay gacan ka hadal, ayna u badan tahay inay noqdaan dhibbanayaasha weerarada noocan oo kale, oo aysan ahayn dad ayaga geysta dhibaatada,” sidaas waxaa yiri urur ay ku mideysan yihiin dhaqaatiirta dhanka maskaxda.
Waxaa sanadihii dambe dalka Mareykanka ku soo badanayay dadka toogashada ka geysta goobaha dadka ay ku badan yihiin.